के हो हरेक नागरिकलाई वितरण गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र ? - Hamro Bulletin
बुधबार ०१, बैशाख २०७८ १४:३०
हाम्रो बुलेटिन सोमबार, १७ फागुन २०७७
लामाे समयदेखि बहसकाे विषय बनिरहेकाे राष्ट्रिय परिचयपत्र के हो त ? यो कस्तो हुन्छ ? लिने प्रकृया के हुन्छ ? व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता लगायतका यस्ता थुप्रै विषयमा कौतुहलता हुनु स्वभाविकै हो ।
यसैबीच सरकारले नागरिकको सम्पूर्ण जानकारी सहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । सोहीअनुरुप हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २० लाख नागरिकको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
डेटा संकलन भएका नागरिकको हकमा कार्ड उपलब्ध गराउने योजनाका साथ विभागले कार्ड खरिद गर्ने काम अघि बढाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकालले बताएका छन् ।
‘हालसम्म १८ देखी २० लाख नागरिकको डेटा संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘अब उनीहरुलाई कार्ड उपलब्ध गराउन सुरक्षा फिचर सहितको कार्ड आवश्यक भएकाले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।’
के हाे त राष्ट्रिय परिचयपत्र ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिला राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई दिने परिचयत्रहरुको विषयमा जान्न जरुरी छ । मुख्यतः सरकारले आफ्ना नगरिकलाई दिने परिचयपत्रपत्र दुई किसिमका हुन्छन् । ती हुन् फाउण्डेशनल आईडी र फंसनल आईडी ।
व्यक्तिको पहिचान स्थापित गर्ने फाउण्डेशनल आईडीले राज्यभीत्रका अनेक सेवा सुविधा तथा तथा प्रयोजनका लागि मान्यता पाउँछ । अहिले कायम रहेको त्यस किसिमको परिचयपत्रको रुपमा हामीले नागरिकतालाई लिन सक्छौँ ।
एक व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्तिसँग जुध्न नदिन विशेष किसिमको प्रविधि अपनाइने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक ढकाल बताउँछन् । अहिलेको कागजी प्रणालीमा भने यस किसिमको पद्धति संभव छैन ।